Imithetho eyi-10 yemihlangano efanelekile | Martech Zone
10 Imithetho Yemihlangano Efanelekayo
NgoMsombuluko, Disemba 4, 2006 NgoLwesihlanu, Okthoba 24, 2014 Douglas Karr
Abanye abantu banwaya amakhanda abo lapho ngiphuze ukufika emhlanganweni noma ukuthi kungani ngiyenqaba imihlangano yabo. Bacabanga ukuthi kuwukweyisa ukuthi ngingahle ngivele sekwedlule isikhathi… noma ngingaveli nhlobo. Abangakwazi neze ukuthi angikaze ngiphuze ukufika emhlanganweni ofanelekile. Ngicabanga ukuthi kuwukudelela ukuthi babambe umhlangano noma bangimema kwasekuqaleni.
Imihlangano efanelekile iyabizwa lapho kudingeka.
Imihlangano efanelekile ayihlelelwe iminyaka emithathu ezayo… kuyahlekisa ukubiza imihlangano engenamgomo futhi iphazamise umkhiqizo.
Imihlangano efanelekile iqoqa imiqondo efanele ukuthi isebenze njengeqembu ukuxazulula inkinga noma ukusebenzisa isixazululo.
Imihlangano efanelekile akuyona indawo yokuhlasela noma yokuzama ukuphoxa amanye amalungu.
Imihlangano efanelekile iyindawo yenhlonipho, ukufakwa, ukusebenzisana nokusekelwa.
Imihlangano efanelekile iqala ngokubekwa kwezinhloso okufanele ziqedelwe futhi ziqedwe ngohlelo lokusebenza lokuthi ngubani, ini nokuthi nini.
Imihlangano efanelekile inamalungu agcina isihloko sisemgqeni nangesikhathi ukuze isikhathi samalungu onke singasetshenziswa.
Imihlangano efanelekile kufanele ibe nendawo ekhethiwe eyaziwa kahle ngaphambi kwesikhathi ngawo wonke amalungu.
Imihlangano efanelekile akuyona indawo yokumboza i-butt yakho (leyo i-imeyili).
Imihlangano efanelekile akuyona indawo yokuzama ukuthola izethameli (leyo yinkomfa).
Kukhona okuhlukile. Uyawuthanda lo mhlangano ofanelekayo… oh… nalabo abaneM & Nks.
Tags: imihlangano emihleukuba nomhlangano kanjaniimihlanganoimithetho yemihlangano
Dec 6, 2006 ku-1: 21 AM
UBrandon ungeza okuthunyelwe okuhle maqondana nezindleko zomhlangano: (inani lababekhona * isilinganiso esikhokhiswayo * ubude bomhlangano = $$$ imali enkulu)
Dec 6, 2006 ngo-3: 55 PM
Ngangiyizonda imihlangano eminingi futhi ngathola ukuthi, imihlangano ingxenye enkulu yayo, yayingahlangene nakancane nenzuzo noma inani lamasheya. Kufanele uthengise lolu hlu kubo bonke abaphathi
Dec 6, 2006 ngo-4: 14 PM
Ama-M & M mahle… AmaBrownies angcono! Wake waba nomhlangano ngokuba nemihlangano? I-LOL
Dec 6, 2006 ngo-6: 04 PM
Imihlangano ngemihlangano… ukhohlwe lowo! Argh!
Jan 20, 2011 ngo-10: 09 PM
Mhlawumbe kufanele uzame http://www.agreedo.com. Ikhuluma ngamaphuzu akho amaningi enza imihlangano ikufanele ngokusho kwakho.